Ọnwa ọ na-ebute nnukwu ala ọma jijiji? | Network Meteorology
Otu ìgwè nke agụmakwụkwọ Satoshi Ide, nke Mahadum Tokyo (Japan) duziri eruola nkwubi okwu a. Dị ka a ga-asị na ọ bụ nrọ ọjọọ, ọnwa dị ka ọ na-ebute nnukwu ala ọma jijiji, nke yikarịrị ka ọ ga-abụ na ebili mmiri dị elu ma ọ bụ nke dị ndụ, ya bụ, mgbe satịlaịtị anyị nọ n’ọnwa ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ nke ọhụụ.
Igwe amaralarị satịlaịtị anyị ka ọ na-arụ ike a na-adịghị ahụ anya ma dị ike n'ụwa, na-eme ka ebili mmiri ahụ rụọ ọrụ, na-eme ka ọ dịkwuo ala ma ọ bụ na-erughị ala, na enwerekwa ndị na-eche na ọ na-emetụta mmetụta ndị mmadụ, mana ruo ugbu a ọ nweghị ọmụmụ ihe emere na E gosipụtara na ọ nwekwara ike rụọ ọrụ dị oke mkpa na ịkpalite ala ọma jijiji.
Ndị otu nyocha ahụ mere nnyocha, nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Nature Geoscience, ebeha weghachite oke na njupụta nke ike mmiri, ya bụ, mmetụta nke ike ndọda ekele nke ebili mmiri dị, na e nwere izu tupu nnukwu ala ọma jijiji., nke nwere 5,5 dị elu ma ọ bụ karịa.
Así chọtara mmekọrịta dị n'etiti ikike ikuku na nnukwu ala ọma jijiji, ma a chọpụtaghị ya site na ala ọma jijiji nke pere mpe. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ka bụ ọganihu na-eju anya, nke enwere ike iji ịkọ oke ala ọma jijiji.
Ala ọma jijiji dị ka Maule (Chile) na 2010 ma ọ bụ Tohoku-oki (Japan) na 2011 mere mgbe enwere nnukwu njupụta nke ike mmiri dị elu. Ka ọ were, ọ dị ka enwere mmekọrịta dị n'etiti otu ihe mere na nke ọzọ nke ahụ ga-eme ka ndị na-eme nchọpụta, ikekwe n’oge na-adịghị anya, ghọta nke ọma etu ala ọma jijiji si amalite na otu esi atụ amụma iji gbochie ọtụtụ mmadụ ịnwụ na ọdachi ndị a.
Kedu ihe ị chere banyere nchọpụta a? 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ọnwa ọ na-ebute nnukwu ala ọma jijiji?